कोरोनाले हामीलाई सिकाएका केही नयाँ पाठहरू
विकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान र जनचेतना उच्च छ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू पनि उत्तिकै गुणस्तरीय पाउन सकिन्छ । यी देशहरुमा व्यक्तिगत तथा शारीरिक सरसफाइ, वातावरणीय सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाहरूमा कुनै कमी छैन भन्दा फरक नपर्ला । साथै यी राष्ट्रहरू विश्व मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि धेरै अगाडि रहेका छन् । यी राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाल एकदम पछाडि रहेको कुरा यथार्थ नै हो ।
कोभिड १९ हाम्रो देशमा पनि फैलिसकेको छ। यस रोगको विरुद्ध अपनाइएका सावधानीहरूबाट हामी नेपालीले पाठ सिक्न जरूरी छ। र यस रोगले सिकाएको पाठबाट थप कुराहरू सिक्दै अगाडि बढ्ने समय आएको पनि छ।
हाम्रो देश शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले अझै पनि धेरै पछाडि रहेको छ । मानिसको आफ्नै बानी तथा व्यवहारले गर्दा पनि थुप्रै रोगहरूबाट ग्रसित हुन परेको अवस्था छ । बर्सेनि झाडा पखालाका कारणले थुप्रैले ज्यान गुमाइरहेको समाचार पनि सुन्न सकिन्छ । नेपालको ग्रामिण भेगहरूमा खुल्ला शौच गर्ने गरेको पनि पाउन सकिन्छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा प्रदूषणले विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्ने बढ्दो जोखिम छँदैछ भने अर्कोतिर मानिसहरूको शारीरिक सरसफाइको कमी तथा वातावरणको सरसफाइको कमीका कारण पनि रोगीको संख्या बढ्दो पाउन सकिन्छ। त्यस सँगसँगै मानिसमा जनचेतनाको पनि कमी भएको पाउन सकिन्छ । जसका कारणले विभिन्न रोग लाग्ने र सर्न सक्ने खतरा छ ।
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण मानिसहरू केही सजग भएको पाइएको छ । नेपालमा कैयौं स्थानमा साबुनपानीले हात धुने चलन छँदै थिएन तर कोरोनाको संक्रमणपश्चात मानिसहरूको हात धुने बानीको विकास भएको पाउन सकिन्छ । त्यस्तै स्यानिटाइजरको प्रयोग पनि बढेको पाइएको छ। मानिसले आफ्नो एवम् वातावरणको सरसफाइमा पनि केही ध्यान दिन थालेका छन् । यस संक्रमणपछि विकास भएको बानी के यो संक्रमणपछि पनि रहिरहन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर उत्तिकै जटिल छ।
स्वास्थसंस्थाहरूमा सुरक्षाका उपकरणहरू PPE को प्रयोग पनि कोरोनाकै कारणले सुरू भएका छन् । तर अन्य समयमा स्वस्थ्यकर्मीहरू न्यूनतम सुरक्षाबिना पनि अत्यन्त जोखिमका साथ काम गर्न बाध्य थिए । संक्रमणपश्चात पनि स्वस्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिमबाट बच्ने न्यूनतम सुरक्षाका सामाग्रीहरू जस्तै पञ्जा, मास्क, एप्रोन, बूट उपलब्ध हुन्छ त ? ताकि भोलि सामान्य दिनहरूमा पनि ती न्यूनतम सामान्य वस्तुहरूको प्रयोगले कोरोना मात्र नभई अन्य जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकोस् । आशा गरौं यस परिस्थितिबाट गुज्रिसकेपछि यसले सिकाएको पाठलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न सकियोस् ।
विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न जरूरी हुन जान्छ । त्यस्तै मानिसको विकास र स्वस्थ जीवनका लागि यस अवस्थाले सिकाएको पाठलाई व्यवहारमा उतार्न सकियोस् ।
साबून पानीले हात धुने, व्यक्तिगत तथा शारीरिक सरसफाइ, वातावरणको सरसफाइ, सुरक्षा उपकरणको प्रयोग तथा हाम्रो बानी र जनचेतनामा वृद्धि भोलिका सामान्य दिनहरूमा पनि रहिरहोस् ।
लेखक, जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्